नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय: व्यवसायभित्रका आधारभुत समस्याहरु – Nepali Public
भदौ ३१, काठमाण्डौ ।
वैशाख ८, २०७४, “मानव बेचबिखनमा एजुकेशनल कन्सलटेन्सीको पनि हात छ ।” भैरहवामा मानव बेचबिखनको विरुद्ध आयोजित क्षेत्रीय गोष्ठीका सहभागीले यस्तो निचोड निकालेका थिए । गोष्ठीमा मानव बेचबिखनबिरुद्धमा काम गरिरहेका संघसंस्था र सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता थियो ।
पौष १६, २०७४, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले मानव तस्करीको आरोपमा एकजना व्यवसायीलाई पक्राउ ग¥यो । पक्राउ पर्ने व्यक्ति थिए, काठमाण्डौस्थित एक कन्सलटेन्सीका संचालक । उनीमाथी “आकर्षक रोजगारी लगाइदिने भन्दैै दक्षिण अफ्रिका पुर्याएर युवाहरुलाई बिक्री गरेको” आरोप थियो ।
नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा हावी बिकृतीहरुका बारेमा बुझ्न उल्लेखीत दुई वटा उदाहरण प्रयाप्त छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकरात्मक छैन् । बेला–बेलामा मानव तस्करको बिल्ला भिडाइएको तितो यथार्थ अनुभव नगर्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायी कमै होलान ।
‘कुनै व्यक्तिको निजी समस्या एवम् कठिनाई हटाउन गरीने सहायता, दिईने सल्लाह र मार्गदर्शनलाई परामर्श भनिन्छ । परामर्श दिने व्यक्तिलाई परामर्शदाता भनिन्छ । यो एउटा सहयोगी प्रक्रिया हो । यसमा साक्षात्कार अथवा अन्य माध्यमबाट परामर्शदाता सेवाग्राहीको नजिक जान्छ र उसको शक्ति र सीमाको बारेमा उसलाई यथार्थ बोध गराउछ । सबै समुदायमा परामर्श दिने र परामर्श लिने परम्परा पाईन्छ । चाहे दुई वा सो भन्दा बढी विकल्पमध्ये एउटा चयन गर्ने समस्या होस, कुनै प्रकारको भ्रमको स्थिति होस अथवा मानसिक तनाव होस, परामर्श आवश्यक और अपरिहार्य हुन्छ ।’ परामर्शको बारेमा विकिपीडियामा दिइएको परीभाषाको सम्पादित अंश हो यो । यहि परीभाषालाई आधार मानेर बिश्लेषण गर्ने हो भने, के नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरु साच्चिकै यो परीभाषा अनुरुप काम गरीरहेका छन् त ? अनि के साच्चिकै नेपालका शैक्षिक परामर्शदाताहरुले सेवाग्राहीमाथि न्याय गरीरहेका छन् ? यो गम्भिर प्रश्न हो ।
नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय उदयीमान व्यवसायको रुपमा अघि सर्दैछ । शिक्षा मन्त्रालयको स्विकृती लिएर देशभरमा करीव १४ सय र स्विकृतीका लागि निवेदन दिएर ७ सयको हाराहारीमा शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन । प्रकृया नै पुरा नगरीकन शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नेहरु पनि उल्लेख्य संख्यामा छन् । यि तथ्यहरुलाई हेर्दा समग्रमा करीव ३ हजार शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरु अस्तित्वमा भएको आकंलन गर्न सकिन्छ । यिनै तथ्यंहरुको आधारमा भन्दा पनि नेपाली शैक्षिक परामर्शदाता क्षेत्रमा नियमनको खाँचो देखीन्छ ।
एकातिर बढ्दै गरेको शैक्षिक परामर्शदाताको संख्या, अर्कातिर प्रकृया पुरा नगरी सञ्चालनमा रहेका परामर्शदाता कम्पनिको अस्तित्व । यि दुवै कारणले गर्दा परामर्श व्यवसायमा एक किसीमको बेथितीको सृजना भएको छ । यतिमात्र होईन, कर्मकाण्डी रुपमा मात्र प्रकृया पुर्याएका केहि परामर्शदाता कम्पनिहरुका कारण पनि समस्या देखिन्छ । नेपाल सरकारले तय गरेको निर्देशिका (शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका) पालना गर्नु त परको कुरा कतिपय शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनिहरुलाई निर्देशिकाको बारेमा सतही जानकारी जानकारी समेत नभएको पाईन्छ ।
यो अवस्थाको सृजना हुनुमा नेपाल सरकारको नियामक निकायको कमजोरी त छदैछ, शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुका विभिन्न छाता संगठनहरु पनि उत्तिकै दोषि छन् । करीव दर्जनको हाराहारीमा रहेका छाता संगठनहरु यस क्षेत्रमा भएका बेथितीहरुप्रति उदासिन नै देखिन्छन् । शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनिका छाता संगठनहरुको ध्यान आफ्ना सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि र नियमन भन्दा बढी अन्य बिषयमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा, शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा बेथिती र समस्याको भारी ठुलै देखिन्छ । एकै खेपमा बिसाउन असम्भवप्राय देखिने यो भारी बिस्तारै बिसाउदै लैजाउनुको बिकल्प छैन् । यो कार्यमा नेपाल सरकार र परामर्शदाता कम्पनिका छाता संगठनको भुमिका त अपरिहार्य नै छ । साथै स्वयम् शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनिहरुले यसमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । नेपाल सरकार र आफ्ना छाता संगठनहरुले निर्दिष्ठ गरेका निर्देशीका वा आचार संहिताको पालना अक्षरस पालना मात्र गरिदिने हो भने पनि एक तिहाई समस्या स्वतः समाधान हुने निश्चित छ । साथै बाँकि दुई तिहाई समस्या (जसको बारेमा हामी अर्को “नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय”को अर्को सामग्री मा चर्चा गर्नेछौ) समाधान गर्ने मार्ग पनि प्रशस्त हुनेछ ।
Previous Article नक्कली पेस्तोल र लागुऔषधसहित ३ जना पक्राउ
Next Article मिर्गौला पीडितलाई एक लाख सहयोग